​धरान र इटहरीलाई राजधानी बनाउन आफ्नो आफ्नै जोडबल
न्यूजलय बुधबार ०८, कार्तिक २०७४
धरान । इटहरी, धनकुटा र विराटनगरले एक नम्बर प्रदेशको राजधानी दाबी गरिरहँदा धरानले पनि राजधानी दाबी गरेको छ । त्यसका लागि धरानले विभिन्न आधारहरु पेश गरेको छ ।
राज्य पुनर्संरचना समितिले राजधानीको लागि सामान्यतः चारवटा आधारहरुलाई पेश गरेको छ । जस बमोजिम अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाकाबाट....
​भ्रष्टाचार न्यूनिकरण गाह्रो : प्रमुख आयुक्त बस्नेत
न्यूजलय मङ्गलबार ०७, कार्तिक २०७४
इटहरी । भ्रष्टाचार न्यूनिकरणको लागि आफूहरुले प्रयास गरेपनि नियन्त्रण हुन नसकिरहेको अख्तियार दुरूपयोग अनुशन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त दिप बस्नेतले बताएका छन् ।
इटहरीमा अख्तियारको पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय सम्पर्क कार्यालय उद्घाटन र निरिक्षणपछि आयुक्त बस्नेतले पछिल्लो समय सरकारी कर्मचारीहरु रंगेहात समातिरहँदा पनि भ्रष्टाचारमा कमी नआएको भन्दै....
​ऋचाको आत्महत्या रहस्यमय बन्दै, के फेला पार्यो प्रहरीले ?
काठमाडौं । झापा विर्तामोडकी २० वर्षीया ऋचा सेढाइँको आत्महत्याको घटना रहस्मय बन्दै गहिरहेको छ । आइतबार दिउँसो आफ्नै कोठामा झुन्डिएको अवस्था फेला परेकी ऋचाको मोबाइल सबै कल लग डिलिट गरेको अवस्थामा प्रहरीले फेला पारेको छ ।
बिर्तामोड प्रहरी कार्यालयका डिएसपी राजकुमार सिलवालले उनले सम्पर्क....
‘डेंगुको संक्रमणबाट शाहको मृत्यु भएको होइन’ : जनस्वास्थय कार्यलय
झापा । झापामा डेंगुको संक्रमणबाट एकजनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा बिर्तामोड नगरपालिका–४ बिर्ताबजारका ४० बर्षीय उमेश शाह रहेका छन् ।
केही दिनदेखि ज्वरो आउने, जोर्नी दुख्ने लगायतका समस्याका कारण उनी स्वास्थ्य उपचारका लागि बिर्ता हेल्थ क्लिनिकमा आएका थिए । त्यहाँबाट उनलाई थप....
​हर्न बजाउनेबाट २५ दिनमै करिब तीन लाख राजश्व संकलन
इटहरी । प्रदेश १ का सबै जिल्लामा लगाइएको नो हर्न अभियान अन्तर्गत ट्राफिक प्रहरीले २५ दिनमै करिब तीन लाख राजश्व संकलन गरेको पाइएको छ ।
सूचनाको हकका अभियन्ता राजु श्रेष्ठले हर्न बजाएर कारबाही तथा जरिवानाको बिवरण दिँदै ट्राफिक प्रहरीले दुई लाख ८२ हजार पाँच....
​इनरुवा पुगेर गच्छदारले खोले कांग्रेसमा फर्कनुको कारण
न्यूजलय सोमबार ०६, कार्तिक २०७४
सुनसरी । उपप्रधान, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री विजयकुमार गच्छदारले समयको माग अनुरुप आफु माऊ पार्टी कांग्रेसमा फर्किएको बताएका छन् । नेपाली कांग्रेस सुनसरीले सोमबार इनरुवामा गरेको शुभकामना तथा चिया पान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै गच्छदारले राजनैतिक अस्थिरता र मुलुकको आवश्यकतालाई महशुस गरी नेपाली कांग्रेसमा....
​धरानमा ३ जना नायवसुब्बा घुससहित पक्राउ
धरान । ईलाका प्रशासन कार्यालय धरानका तीन जना कर्मचारी घुस रकमसहित पक्राउ परेका छन् । सोमबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको इटहरीस्थित क्षेत्रीय कार्यालयबाट गएको टोलीले सेवाग्राहीसँग घुस लिएको नगद २० हजारसहित कार्यालयका तीन जना नायब सुब्बा हर्कराज राई, युवराज पोखरेल र मोहन सुवेदीलाई पक्राउ गरेको....
​किन गरिन् ऋचाले आत्महत्या ? फेसबुकमा यसरी लेखेकी थिइन्
काठमाडौं । झापा बिर्तामोडकी ऋचा सेढाईँले शुक्रबार राति फेसबुकमा स्टाटस लेखिन्, ‘तिहार के हो ? रित्तो मन, खाली निधार र भरिएका आँखाहरुलाई सोध्दा पनि थाहा हुन्छ ।’ प्रोफाइल फोटोसँगै उनले यस्तो स्टाटस लेखेकी हुन् ।
त्यस पछि उनका केही सामान्य स्टाटस फेसबुकमा देखिए....
सुनसरीका ५४ प्राथमिक विद्यालयमा शिक्षक अभाव
इनरुवा । सुनसरीका ५४ प्राथमिक विद्यालयमा शिक्षकको अभाव रहेको पाइएको छ । जिल्लाका आधारभूत तहका प्राथमिक विद्यालयमा दरबन्दीअनुसारको शिक्षक नभएका कारण शिक्षक अभाव रहेको जिल्ला शिक्षा कार्यालयले जनाएको छ ।
कार्यालयका अनुसार जिल्लामा २०६५÷६६ मा दर्ता भएका अधिकांश विद्यालय शिक्षक दरबन्दी अभाव रहेको हो....
अपहरणकारी पक्राउ, ३ करोड फिरौती माग्ने योजना विफल
न्यूजलय आइतबार ०५, कार्तिक २०७४
सप्तरी । सप्तरीमा तीन करोड फिरौती रकम माग गर्ने अपहरणकारीको योजना प्रहरीले विफल बनाइदिएको छ । एक साताअघि अपहरणमा परेका एक जना भारतीय व्यापारीलाई सप्तरी प्रहरीले जिल्लाको कञ्चनरुप नगरपालिकाबाट सकुशल मुक्त गराएपछि उनीहरुको योजना विफल भएको हो । सप्तरीको कञ्चनरुप नगरपालिका वडा नम्बर ८ बाट....